Meyi 28, 10:55
в Ama-Analytics, Ezomnotho nokuhlaziya
Ochwepheshe be-Agribusiness Expert-Analytical Center “AB-Center” www.ab-centre.ru walungiselela isifundo sokumaketha Imakethe yaseRussia yezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla ngo-2001 ukuya ku-2020.
Ngezansi kunezingcaphuno ezivela emsebenzini wokuthunyelwa kwezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla okuvela eRussia.
Ukuthunyelwa kwezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla okuvela eRussia ngonyaka ka-2019 kufinyelela kuma-USD 24 wezigidi, okuyisilinganiso esingaphansi kwesibalo sonyaka wezi-741,4 (ngo-2018% noma nge-USD 0,6 million).
* - Kulokhu, ngemikhiqizo yezolimo nokudla sisho izimpahla ezifakwe emaqenjini omkhiqizo kusuka ku-01 kuye ku-24, izigaba ze-FEA zomsebenzi wezomnotho wakwamanye amazwe kusuka ku-I kuye ku-IV (bheka irekhodi lezikhodi zamakhodi we-HS).
Ingxenye I - Izilwane ezibukhoma; imikhiqizo yezilwane.
Isigaba II - Imikhiqizo yemvelaphi yezitshalo.
Isigaba III - Amafutha namafutha omsuka wezilwane noma zemifino kanye nemikhiqizo yokuqhekeka kwawo; amafutha alungiselelwe adliwayo; Imisipha yesilwane noma imvelaphi yemifino.
Isigaba IV - Ukudla okulungiselelwe; iziphuzo ezidakayo nezingadakayo neziviniga; ugwayi kanye nezinto zawo (bheka incwadi eyinkomba yamakhodi we-HS).
Emaqenjini amaningi womkhiqizo, iRussia ngonyaka ka-2019 yandise kakhulu ukuthunyelwa kwezimpahla kwamanye amazwe. Ukudideka kwezinkomba ezijwayelekile kuhlotshaniswa nokwehla kokuthengiswa kwezimpahla (imikhiqizo ngokuya ngekhodi le-HS 10). Lokhu kungenxa yamanani aphansi ezitshalo ngonyaka we-2018, obe nomthelela ekusebenzeni kokuhweba kwangaphandle engxenyeni yokuqala ka-2019.
Ngokwemiphumela yango-2020, kungenzeka ukuthi, ngamanani wedola, ukuthunyelwa kwezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla okuvela e-Russian Federation, ngenxa yokuncipha okukhulu kwe-ruble, nakho kuzothuthuka. Kodwa-ke, ngamanani wenyama (ngamathani), ukuthunyelwa kulindeleke ukuthi kwandise izinhlobo eziningi zezimpahla.
Okwamanje, ukungeniswa kokudla ngamanani wenani kusadlula ukuthengiswa kwabo, kepha kancane kancane leligebe liyancipha. Njengoba kulindelwe esikhungweni i-AB Center, ngenkathi kugcinwa amandla amanje, ukulethwa kokudla okuthekelisa kungadlula ukulethwa kokulethwa esikhathini esizayo esiseduze (ngo-2020-2022).
Indima yemikhiqizo yezolimo emthamo ophelele wokuthengiswa kwamanye amazwe eRussia eminyakeni yamuva ikhule kakhulu.
Ubumbano bezolimo obungenye yezimboni kungenye yezindawo ezimbalwa zomkhakha wezomnotho kwiRussia Federation ekhula ngempumelelo futhi inemikhiqizo yokuncintisana ezimakethe zomhlaba. Ngo-2016-2019 isabelo semikhiqizo yokudla yenani eliphelele lokuthunyelwa ngaphandle kwaseRussia, ngokusho kwe-AB Center, likwi-5,5-6,0%, ngenkathi sibuyele emuva ngo-2001-2013. ayizange idlule ku-3,4% (futhi eminyakeni ethile yayingaphansi kwe-2,0%).
Izindatshana ezibalulekile ekuhanjisweni kwezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla okuvela eRussia ngonyaka ka-2019:
1. Ukolweni (imikhiqizo ngokuya nge-HS code 10). Lokhu ikakhulukazi ukolweni, ibhali kanye nommbila. Ngokwezinga elincane kakhulu, kuthunyelwa irayisi, i-rye, i-buckwheat nama-oats kusuka eRussia. Ngo-2019, ukuthunyelwa okusanhlamvu okuvela e-Russian Federation ngamanani entengo kwafinyelela kuma-32,0% wempahla ephelele yezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla phesheya (amathani ayizinkulungwane ezingama-39 313,4 ngenani lama-USD 7 908,5 wezigidi). Ngo-2018, isabelo sokusanhlamvu kokudiliva okuphelele sikhulu kakhulu futhi safinyelela kuma-42,0% (amathani ayizinkulungwane ezingama-54 ngenani lama-USD 814,5 wezigidi).
2. Imithombo, uwoyela wemifino, uwoyela, isidlo nezinye izinsalela eziqinile ezitholakala ngokukhishwa kawoyela wemifino. Le mikhiqizo iveza ukulethwa kohlaka lwamaqembu womkhiqizo akhulisiwe (amakhodi we-HS) njengo-12, 15 no-23 ngokulandelana. Inani eliphelele lokuthunyelwa kwempahla engenhla, ngokuya ngokubalwa kwe-Ab-Center, lalingama-5 687,6 USD USD (23,0% yenani eliphelele lokuthunyelwa kwempahla kwezinto zokusetshenziswa kwezolimo nokudla). Ukuqhathanisa, ngonyaka we-2018, izinkomba zazisezingeni le-4 million USD (516,8%).
3. Izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle (Ikhodi ye-HS 03). Ukudiliva okuthunyelwa kuleli qembu lomkhiqizo ngonyaka ka-2019 kulinganiselwa ku-USD 4 wezigidi (698,9%). Ngo-19,0, inani lokukhishwa kwezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle ezivela eRussia Federation lalingama-USD 2018 wezigidi (4%).
Ingqikithi ye-TOP-3 yamaqembu womkhiqizo enwetshiwe, ngokuya kokuqagelwa kwe-AB-Center, okunikezwe ngo-2019 73,9% wako konke ukulethwa ngamanani wenani.
Izinto ezilandelayo nazo zingaphawulwa:
4. I-chocolate kanye nenye i-confectionery equkethe i-cocoa (Ikhodi ye-HS 18) - 2,9%.
5. Imikhiqizo eqediwe okusanhlamvu okusanhlamvu, ufulawa, isitashi noma ubisi; confectionery kafulawa (i-HS code 19) - 2,8%.
6. Iziphuzo zotshwala nezingadakiwe (Ikhodi ye-HS 22) - 2,5%
7. Inyama (Ikhodi ye-HS 02) - 2,4%. Qaphela ukuthi le ndawo iyakhula ngenkuthalo. Ngonyaka owedlule, isabelo senyama sasingu-1,6%, ngonyaka ka-2013 - sasingu-0,2% kuphela.
8. Ugwayi (Ikhodi ye-HS 24) - 2,2%.
9. Ushukela (Ikhodi ye-HS 17) - 2,1%.
10. Imifino (Ikhodi ye-HS 07) - 1,9%. Ngokubona kwethu, uhlelo lokuhlukaniswa kwezimpahla ngokuya nge-FEA aluvezi ngaso sonke isikhathi isithombe sangempela.
Eqinisweni, isisekelo sokudiliva ngaphansi kwekhodi 07 ngamapisi namachwane, asondele kakhulu kun okusanhlamvu kunemifino.
Noma kunjalo, ekuhlukaniselweni kwezimpahla ngokuya ngamakhodi we-HS, lezi zimpahla zihlukaniswa ngemifino. Ukuthunyelwa kwemifino ngqo (ngomqondo ojwayelekile wegama) kusuka kwiRussian Federation kumazinga aphansi.
Kubalulekile! Izibalo zokuhweba zakwamanye amazwe zalungiswa kusetshenziswa amathuluzi i-database yezibalo zamasamba i-VEDLORD.
umbhali: U-Alexey plugov, Ph.D.
Source: Isazi sesayensi yezolimo kanye nesikhungo sokuhlaziya "iAB-Center"
Tags: ngenisaUkungeniswa kwezolimoukuthekelisaUkuthunyelwa kwezolimo kwamanye amazwe
Izwekazi laseAzerbaijan lithumela amazambane aqoshwa kulo nyaka
Izinkinga ezihlelekile zokulawulwa kokubulala izinambuzane eRussia zisongela ukuthekelisa okwenziwa ekhaya kwezolimo
Izinhlobo ezingama-26 zamazambane zitshalwa kulo nyaka eKrasnoyarsk Territory
IRussia iyaqhubeka nokunikeza amazambane eMoldova